Tonga ny Ara Of Whole House Customization Miaraka amin'ny fanatsarana amin'ny ankapobeny ny haavon'ny fanjifana sy ny fanavaozana mitohy ny foto-kevitry ny fanjifana, ny fanamboarana trano manontolo dia lasa zava-misy tsy azo ovaina amin'ny fanjifana isan-tokantrano. Shina dia firenena manana habe vaovao c...
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-30
Noho ny fiantraikan'ny COVID-19 dia niova ho sehatra nomerika an'ny Koelnmesse ny Koelnmesse roa taona. Interzum@home dia hatao ny 04. hatramin'ny 07.05.2021. Ao amin'ny interzum@home, orinasa maherin'ny 140 avy amin'ny firenena manodidina ny 24 no hanolotra ny vokatra sy serivisy ao amin'ny sehatra nomerika an'i Koelnmesse. ...
YALIS Miseho Amin'ny Foara faha-124 Canton
Fahombiazana lehibe ho an'ny YALIS ao amin'ny Foara Canton any Guangzhou izay manolotra ireo fanangonana vaovao. Tao amin'ny Foara Canton any Guangzhou, ny hetsika lehibe indrindra any Shina, ary maherin'ny 25500 ireo orinasa fampirantiana no nandray anjara tamin'izany. Alohan'ny...
Ny fampirantiana Indo Build Tech Jakarta faha-16
Ny fampirantiana Indo Build Tech Jakarta natao tamin'ny 2 mey hatramin'ny 6 mey tao amin'ny ICE (Indonesia Convention Exhibition) YALIS dia nanatrika ity fampirantiana ity ihany koa. Ny lehibe indrindra amin'ny Indo Build Tech Event Series sy ny tranobe & int...
Hetsika amin'ny Interzum 2019
nataon'ny admin tamin'ny 21-03-20
Tamin'ny volana aogositra 2019, nanatrika ny Foara Interzum tany Cologne, Alemaina ny ekipan'ny YALIS. Araka ny fantatsika rehetra, Interzum no tsenan'ny varotra lehibe indrindra eran-tany amin'ny famokarana fanaka sy ny famolavolana anatiny. Miandrandra ny fanitarana bebe kokoa ny tsena Eoropeana ao an-toerana izahay. ...